Garoowe:- Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr.Cabdiraxman Faroole iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa saaka ka dhoofay magaalada Garoowe iyagoo ku sii jeeda magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Itoobiya. Wafdiga Madaxweynaha Puntlland ku weheliyo socdaalkiisa ayaa waxaa ka mid ah Wasiirka Waxbarashada Dowladda Puntlland Dr.Cabdi Faarax Siciid Juxa,Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladdaha hoose Dowladda Puntlland Gen.Cabdilaahi Axmed Jaamac Ilkajiir, xubno sare oo ka tirsan Madaxtooyada Puntlland iyo saraakiil ciidan.
Wafdiga Madaxweynaha Dowladda Puntlland Dr.C/raxmaan Faroole ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ku sii sagootiya ku simaha Madaxweynaha ahna Madaxweyne ku xigeenka Dowladda Puntlland Gen.Cabdisamada Cali Shire iyo xubno ka tiran 2-da gole ee dowllada Puntlland.
Ilaa hadda ma cada safarka uu Madaxweynaha Dowladda Puntlland ku aaday dalka Itoobiya u jeedadiisa rasamiga ah balse ilo wareed kale duwan ayaa waxaa ay sheegayaan in madax weynuhu uu ka hellay casumaad Ra’iisulwasaaraha cusub ee dalka Itoobiya kulamo gaar gaar ahna uu la qaadan doono Safaaradaha reer galbeedka ee safaaradaha ku leh dalka Itoobiya, Masuuliyiin ka tirsan IGAD iyo Maraykanka.
Safarka Madaxweynaha Puntlland Dr Cabdiramaan Faroole ayaa ku soo beegmaya xili maalinti shalay waraysi uu siiyey idaacada BBC-da uu weerar dhinac afka ku qaaday madax da DFS gaar ahaan Madaxweynaha xilkiisu dhamaaday Sheekh Shariif Sh Axmed isagoo ku eedeeyey in uu ku wada faragelin gudiga loo xil saaray in ay soo xulaan xilibaanada ka mid noqonay dowllada ay beesha caalamku u dhisi doonto dalka Soomaaliya maalmaha soo socda.
243,963 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress